Mogadishu Journal » 2018 » May » 31
Guddoomiyihii Ururka dhalinyarada Warta Nabada oo caawa la dilay
Mjournal :-Rag hubeysan ayaa caawa gaar ahaan xilliga afurka waxa ay agagaarka Masjidka Cabdalla Cawareero, degmada Warta-nabadda ee gobolka Banaadir ku dileen Guddoomiyihii ururka dhalinyarada degmadaasi, kaasi oo lagu magacaabi jiray C/wali Axmed Maxamed. Dableyda ayaa C/wali...
Zinedine Zidane ayaa si layaab leh isaga casilay shaqada Tababarnimo ee Real Madrid, kaddib muddo labo sano iyo bar oo uu xilka Tababarnimo hayay. babaran u dhashay Faransiiska ayaa shir jaraa’id oo aan la fileyn qabtay maanta oo khamiis ah, si uu u xaqiijiyo inuu ka tagayo...
Mjournal :-Maamulka gobolka Banaadir oo iskaashi ka helaya dowladda Shiinaha ayaa dhawaan qorsheynaya in dib u dhis lagu sameeyo goobihii biyo mareenada ahaa ee ku bur buray dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay. Kulan gaar ah oo dhexmaray Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo...
Mjournal :-Iyadoo sanad walba maanta oo kale 31-ka May 2018 ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee loo asteeyey joojinta cabista sigaarka ayaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed waxay mar kale bulshada kaga digayaan qatarta uu leeyahay iyo cudurada halista ah ee ka dhasha. Prof....
Mjournal :-Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheikh C/raxmaan ayaa maanta kormeer ku sameeyay xafiisyo cusub oo ay yeelanayaan Guddiyada ugu shaqada badan Baarlamaanka Soomaaliyeed. Ujeedka kormeerka Guddoomiyaha Golaha Shacabka uu ku...
Pep Guardiola oo toddobaadka cusub labo saxiix oo waa weyn sameyn doona
Kooxda Manchester City ayaa wadda dadaallo ay ku adkeyneyso safkeeda xilli ciyaareedka dambe si tartan-ka Champions League-ga ay natiiji fiican kaga keenaan. Pep Guardiola ayaa doonaya inuu qarash gareeyo lacago qiyaastii dhan £100m oo uu kusoo qaadan doono laba laacib oo ka...
Mjournal :-Ciidanka ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay waxa ay hawlgal ka sameeyeen qeybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Halwgal si gaar ah looga sameeyay xaafado ka mid ah degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu soo...
Farmaajo iyo Uhuru oo heshiis kala saxiixday
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho hal cisho ah ku jooga dalka Kenya ayaa maanta wada hadallo kula yeeshay Madaxtooyada Kenya dhiggiisa dalkan Mudane Uhuru Muigai Kenyatta. Madaxweyneyaasha ayaa ka wada...